people Nepal » यसरी सल्किँदै छ संक्रमण यसरी सल्किँदै छ संक्रमण – people Nepal
Posted on August 4, 2020 by Tara Nidhi
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २०, काठमाडौं । नेपालमा लकडाउन गर्दा कोरोना संक्रमित दुई जना मात्र थिए। झन्डै चार महिनामा लकडाउन हटे पनि संक्रमण भने बढेको बढ्यै छ। सोमबारसम्म संक्रमितको संख्या २० हजार ७ सय ५० पुगेको छ। पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांकले स्थिति भयावह देखाउँछ। वैशाख २० गतेसम्म संक्रमितको संख्या ५९ मा सीमित थियो। जेठ १९ मा कुल संक्रमित १ हजार ८ सय ११ जना थिए।
पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको संख्या २९ पुगेको छ। ‘त्यसले गर्दा पनि धेरै संख्यामा पहिचान हुन थालेका हुन्। अहिलेको संक्रमण ठाउँमा लोकलाइज ट्रान्समिसन नै हो। समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको भन्न मिल्दैन’, डा. दीक्षितले भने।
विज्ञका अनुसार कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्नुमा सरकारका साथै नागरिक पनि जिम्मेवार छन्। डा. दीक्षितले भने, ‘पीसीआर परीक्षण नबढाएका राज्यलाई दोष दिन सकिन्छ। त्यस्तै हामी नागरिक पनि दोषी छौं। हेलचेक्र्याइँ गर्छौं।’
अव्यवस्थित नाकाका साथै क्वारेन्टाइन खचाखच हुँदा संक्रमण एकबाट अर्को सर्न पुगेको डा. प्याकुरेलको भनाइ छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय पनि प्रभावकारी हुन सकेन। ‘सुरुमै पीसीआर परीक्षण गरेको भए संक्रमण यसरी फैलने थिएन। आवश्यक नै नभएको आरएटी (र्‍यापिड एन्टिबडी टेस्ट) गरियो’, अमेरिकाको टेक्सासस्थित सोनिक रेफरेन्स ल्याबको क्लिनिकल मोलिकुर बायोलोजी विभागका निर्देशक डा. विजय ढकालले भने। द्रुत परीक्षण रोक्न मन्त्रालयले आइतबार निर्देशन दिएको छ।
कोरोना फैलिरहे पनि भौतिक दूरी कायम गरिएको छैन। मास्क लगाउन ध्यान दिएको पाइँदैन। स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरे पनि अटेर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अर्कोतर्फ कोरोेना संक्रमणमा केन्द्रित हुने बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सक्षम देखिएन। डा. प्याकुरेलले भने, ‘टेबलटेनिसको क्याप्टेनलाई फुुटबल मैदानमा उतारेजस्तो भयो।
ओबीसीआई प्रा.लिलाई कालोसूचीमा नराख: सर्वोच्च